Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo loo xiray baaritaan lagu hayo lacag uu ka helay Col. Qadaafi | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo loo xiray baaritaan lagu hayo lacag uu ka helay Col. Qadaafi
Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa loo sii qaaday saldhig booliis si su’aalo looga waydiiyo eedaymo sheegaya in uu dhaqaale uu ku ol’olaystay ka qaatay madaxweynihii hore ee Liibiya Mucammar Qaddafi.
Booliisku waxay baarayaan nidaam darro ka jirtay dhaqaalihii uu madaxweynenimada ugu ol’olaystay sannadkii 2007dii. Booliiska ayaa horay su’aalo u waydiiyay. Alexandre Djouhri oo kaaliye u ahaana dhawaan ayaa lagu xiray magaalada London.
Sarkozy ayaa ku guuldarraystay in uu awoodda ku soo laabto sannadkii 2012kii. Ilo waaxda caddaaladda ka tirsan ayaa sheegay in su’aalo lagu waydiiyay deegaanka Nanterre, oo ka tirsan magaalada Paris.
Sannadkii 2013kii Faransiiska ayaa billaabay baaritaan ka dhan ah eedaymo sheegaya in ol’olihiisa doorashada loo adeegsaday dhaqaale sharcidarro ah oo laga helay Qaddaafi. Laakiin Sarkozy wuu diiday in uu wax khalad ah sameeyay.
Ilo ayaa sheegay in booliisku ay su’aalo waydiiyeen Brice Hortefeux oo isna ka tirsanaa golihii wasiirrada ee xiligii Sarkozy, arrintaasina waxay dhacday isla Talaadadan.
Previous articleXildhibaan Cabdi Shire: “Jawaari oo xilka laga qaado waa in lagu laabto waayadii furaha Baarlamaanka uu nin jeebka isaga heysan jiray..”
Next articleXildhibaanno cusub oo ku soo kordhay kooxda wada Mooshinka Guddoomiye Jawaari & Wararkii ugu danbeeyay